LABA SHAQAALAHA MSF AH OO LAGU AFDUUBTAY GOBOLKA BAKOOL | Toggaherer's Weblog
WAR DEG DEH AH:DAGAAL XOOGAN OO U DHAXEEYA ISLAAMIYIINTA OO HADDA KA QARXAY BALADWEYN
Moqadisho 19 April 2009 THN
Niman dabley ah ayaa maanta afduub u geystey laba kamid ah shaqaalaha dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ee MSF, shaqaalahan ayaa la rumeysan yahay in ay kula dhasheen wadamada Biljimka & Denmarki, sida uu u sheegay wakaalada wararka ee Reuters goob joogayaal ku sugan Bakool.
Xassan Maalin ayaa sheegay inaysan caddeyn meesha ay ka tirsan yihiin iyo waxa ay ahaayeen dableyda geystey afduubka dhakhaatiirtan.
Mid kamid ah shaqaalaha hay’adaha oo ku sugan Bakool isla markaana ka gaabsadey magiciisa ayaa sheegay in ay kala ahaayeen labada qof ee la afduubay Biljim iyo Daanish, waxa ay wateen gaarigooda waxaana la socdey ilaaliyaashoodi, waxa ay ku socdeen Xudur, xarunta Gobolka Bakool, marka ay ku dhaceen gacanta kooxda dableyda ah.
Afhayeenka Al-shabaab Mukhtaar Roobow ee ka arimaya Gobolada Bay & Bakool, ayaa hadda ka hor u sheegay hay’adaha in ay ka hawlgelikaraan Bay iyo Bakool sidey doonaana u socon karaan iyaga oo amaanka hay’adaha sugaaya.
Shaqaalaha samafalka & Suxufiyiinta ayaa inta badan loo qabsadaa qafaalasho, wadanka sharciga iyo kala danbeyntu cirka ku laalantey ee Soomaaliya, waxa ayna inta badan dalbadaan afduubayaashu madaxfurasho.